Madaxweyne Siilaanyo Oo Magcaabay Masuuliyiin Cusub, Qaarna xilka Ka Qaaday | Araweelo News Network (Archive) -
Hargeysa(ANN)Madweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa sameeyay magcaabis iyo xilka qaadis, ku waajahan masuuliyiinta gobolada qaarkood. qoraal saxaafada loogu talo galay oo kasoo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay masuuliyiinta
xilka laga qaaday iyo kuwa cusub.
Qoraalkaa ayaa u dhignaa sidan:- “Madaxweynaha JSL, Mudane: Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) waxa uu Digreetooyin Madaxweyne xilalkii ay qaranka u hayeen kaga qaaday Badhasaabadii Gobolada Sanaag, Togdheer, Gabiley iyo badhasaabku xigeenkii Gobolka Togdheer.
Sidoo kalena Madaxweynuhu waxa uu u magacaabay Masuuliyiin Cusub oo buuxinaya jagooyinka ay baneeyeen masuuliyiintaa hore.
Markuu Aqoonsaday: In baahi loo qabo buuxinta jagooyinka Gudoomiyeyaasha Gobolada Gabiley, Sanaag iyo Togdheer;
Markuu ku Qancay: Inay buuxin karaan, aqoon iyo kartina u leeyihiin jagoouinkan;
1. In Mudane, Xuseen Cumar Magan, laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado Gudoomiyaha Gobolka Gabiley ee JSL.
2. In Mudane, Aaden Diiriye Cigaal, laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado Gudoomiyaha Gobolka Sanaag ee JSL.
3. In Mudane, Cabdoo Axmed Aayer, laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado Gudoomiyaha Gobolka Togdheer ee JSL.
4. In Mudane, Maxamed Maxamuud Yuusuf, laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado Gudoomiye Ku-xigeenka Gobolka Togdheer ee JSL.
Masuuliyiinta Xilalka laga qaaday:-
1. Mudane, Cali Aaden Meecaad
Gudoomiyihii Hore ee Gobolka Gabiley
2. Mudane, Cali Cabdi Hurre
Gudoomiyihii Hore ee Gobolka Sanaag
3. Mudane, Yaasiin Muxumed Cabdi
Gudoomiyihii Hore ee Gobolka Togdheer
4. Mudane, Cabdi Daahir Xasan
Gudoomiye Ku-xigeenkii Hore ee Gobolka Togdheer
Madaxwynaha Jamhuuriyada Somaliland, waxa uu Badhasaabadii hore uga mahad celiyey mududii ay xilalkaas u soo hayeen qaranka,
Isla markaana Madaxweynuhu waxa uu digreetooyinkan ku amray inay masuuliyiintani xilalkaa ku wareejiyaan sida ugu dhakhsaha badan gudoomiyeyaasha cusub ee loo igmaday xilalkan inay qaranka halkaa uga siiiwadaan.”